Mwepụta imewe - ntinye aka na BIM dị elu site na Digital Cufflinks - Geofumadas
Ọktoba, 2019 innovations, Microstation-Bentley
Twmụ ejima dijitalụ "Evergreen" na-agbasawanye uru nke ọrụ nke ndị injin na akụrụngwa na ngwa Bentley mepere na ngwa simulation ihe niile metụtara ndụ
Bentley Systems, Incorporated, onye na-eweta uwa niile nke ngwanrọ na igwe ojii maka umu ejima dijitalụ maka ọganihu nke imepụta akụrụngwa, ihe owuwu na arụmọrụ, taa kwupụtara mgbakwunye na mmelite ya na imepụta ihe ngosi ya na ngwa nkedo iji bulie injinia nke ejima dijitalụ n'ofe ndụ niile. Bentley na-emeghe ngwa na-akwado nkwado, arụmọrụ, na arụmọrụ arụmọrụ dijitalụ na-arụ ọrụ nke metụtara ọtụtụ ọzụzụ ọkachamara metụtara akụrụngwa. Ugbu a, site na igwe ojii ọhụụ maka ejima dijitalụ, uru azụmaahịa na etu esi agbatị oge niile na-arụ ọrụ yana usoro ọrụ nke akụrụngwa akụrụngwa.
“Nnukwu nnabata BIM abaala uru nke ukwuu na ndị ọkachamara na ọrụ nke AEC n'ime afọ iri na ise gara aga, mana ugbu a, site na ọrụ igwe ojii, ịme ngosipụta eziokwu na nyocha dị elu, anyị nwere ike ịga n'ihu na BIM site na ejima dijitalụ »Santanu Das, onye isi osote onye isi oche na nhazi njikọta na Bentley kwuru. Ruo ugbu a, ojiji BIM abụrụla obere nnweta, nke, mgbe ekesara ya na owuwu ahụ, ọ bụ ngwa ngwa, na-efunahụ uru ọzọ dị na data injinia kpọchiri n'ụdị BIM. Ugbu a, ya na ejima dijitalụ , anyị nwere ike imepe data injinịa na ihe ngosi BIM ya na igwe dijitalụ mejupụtara ya bụ ebe mbido, na-emelite ọnọdụ dijitalụ ya na njiri ama na ihe ngosi eziokwu - ọ bụ ebe a ka ọ bụrụ ihe na - atọ ụtọ -, gaa n'ihu ịme ihe na simulating the kwesịrị ekwesị maka ihe bara uru n'oge usoro ihe omume dijitalụ nke usoro ndu ya. N'ikpeazụ, uru nke data injinịa na ihe ngosi BIM nwere ike ịgbatị karịa ibughari ya na ntughari na arụmọrụ, hụ na melite ma ọrụ ngo na arụmọrụ bara uru. Ọganiihu BIM gaa na 4D site na ejima dijitalụ Evergreen pụtara na ụdị ihe eji eme ihe na ihe ngosi nwere ike ije ozi ebumnuche karịrị nke nnweta oru ngo, ọ ga-adị ka DNA dijitalụ nke akụ dị ndụ!
Ọrụ ọhụụ na igwe ojii Digital Twins maka Nhazi Mmekọrịta
Ihe onyinye ntinye nke Bentley mebere ugbu a site na ngwa desktọọpụ rue ọrụ igwe ojii, na-enye òtù dị iche iche ike imepụta, iji anya ahụ ha na 4D ma nyochaa ejima dijitalụ nke akụrụngwa akụrụngwa. Ọrụ ITwin na-ahapụ ndị nchịkwa ozi dijitalụ ịgụnye data injinịa mepụtara site na ngwa ọrụ dị iche iche n'ime ejima dijitalụ na-ebi ndụ, gbakwunye data metụtara ma tinye ha na ịme ngosipụta n'ezie, na-enweghị ịkwụsị ngwaọrụ ha ma ọ bụ usoro ha ugbu a.
Nyochaa nke a na-akpọ Elowinwin na-eme ka usoro ọgụgụ ihe nyocha ngwa ngwa. Ọ na-enyere ndị ọkachamara aka ịmalite nyocha ihe ngosi ad hoc gburugburu ebe obibi 2D / 3D, yana otu oru ngo na-arụ ọrụ na ejima dijitalụ iji mepụta nyocha na nhazi nhazi nhazi nke nhazi ọtụtụ. Ọ na-enye orụ ọrụ:
(maka ndị ọkachamara) iji kaa akara ma kwuo okwu banyere akụkụ nke ụdị 3D ma gbanwee n'etiti echiche 2D na 3D na-enweghị ịhapụ mpaghara 3D
(maka oru ngo nke na-eji ProjectWise) mee ka anya doo anya di na nwunye dijitalụ nke 4D: jide ngbanjin injinị na usoro iheomume a wee nye ezigbo ọrụ maka onye gbanwere ihe na oge
Openwin, ọrụ a na-enye ndị ọrụ OpenPlant gburugburu ebe ọrụ ọrụ kesara na ntụaka ntụzịaka n'etiti ihe nnọchi anya na 2D na 3D nke ihe dijitalụ nke osisi ahụ.
Ngwa mmegharị Modeling na ngwa mmeghe
Sharingkekọrịta akụrụngwa na ijikọ usoro ọrụ dijitalụ n'etiti ọzụzụ na-abụ ntọala nke gburugburu ụdị ịmeghe. Ejikọtara maka injinịa na ngwa BIM dabere na MicroStation pụrụ iche maka ụdị akụ na azịza, gburugburu ụdị Bentley mepere emepe na-akwalite mmekorita, na-eme ka esemokwu esemokwu na imepụta ọtụtụ ihe pụrụ iche site na ngwa ọ bụla.
Mmepe nke ngwa ya na MicroStation ikpo okwu na-ekwe nkwa nnabata, ịnweta ebe njikọ data na ọrụ dijitalụ dị ka ebe a na-eme ihe maka ọba akwụkwọ ndị ọzọ na-eme ka a na-ahụ maka njiri ike. Na mgbakwunye, nyocha na simulation nke igwe eji eme ihe na-eme ka ndị na-ese ha zụlite ọnọdụ dị iche iche iji nweta ihe kachasị dị mma, ọ bụghị naanị maka nhazi nke mbụ, kamakwa maka ihe ndị na-esote ya na ndozi isi obodo maka akụ akụrụngwa.
Mepee Mmelite nke Ngwa Modeling
(Ọhụrụ) OpenWindPower na-enye nkwakọrịta n'etiti ngwa a haziri ahazi na usoro ihe eji egwu mmiri, nyocha ihe owuwu na ọkpọkọ, imezi ọrụ ọrụ yana mgbanwerịrị data n'etiti ọzụzụ, iji belata ihe ọghọm dị na njirisi na arụmọrụ nke ugbo ikuku nke ikuku ofufo na ebili mmiri. OpenWindPower na-enye ndị ọrụ ikuku ihe ngosi ikike iji nyochaa ogo a haziri nke ọma, nyochapụta, belata ihe ize ndụ na iwepụta ozi maka arụmọrụ ha.
"OpenWindPower na-eme ka okirikiri ihe osise dị mkpụmkpụ ma dozie nsogbu nke nnukwu akụkụ dị iche iche, na -ebelata ọnụahịa nke ike ikuku dị n'akụkụ mmepe," Dr. Bin Wang, osote onye isi engineer nke Institutelọ Ọrụ Nnyocha Ọhụụ. Ike, POWERCHINA Huadong Engineering.
(New) OpenTower bụ ngwa emere ahaziri maka emebe, akwụkwọ na nrụpụta ụlọ elu, yana maka nyocha ngwa ngwa nke ụlọ elu ndị na-eme ugbu a maka ndị nwe ụlọ elu, ndị na-ahụ maka ya na ndị na-arụ ọrụ bụ ndị kwesịrị iwelite akụrụngwa. Ntinye nke OpenTower ka emeputara maka oge ozo nke 5G.
Site n'enyemaka nke ngwa Bentley, imepụta na nyocha nke ụlọ elu dị mfe, ngwa ngwa na ntụkwasị obi karịa. Ọ na-enyekwa ndị ahịa anyị afọ ojuju, obi ike na udo nke uche, ma na-emezi nchekwa ọha, ”Frederick L. Cruz, onye isi ala na onye isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka inyocha FL Cruz Engineering kwuru.
Onye na-ese ihe OpenBuildings ugbu a gụnyere LEGION ma mee ka ịdị mma ya dịkwuo mma site na iwepụta ihe arụmọrụ nke oghere ụlọ ọrụ na ụzọ njem maka onye na-aga ije.
OpenSite Kere Ọ gụnyere ike obibi, na-akwado ịtụpụta na atụmatụ nke atụmatụ ịkpa ụlọ, nhazi ọkwa, na imepụta atụmatụ a na-ewu ewu.
Onye Okike OpenBridge ugbu a jikọtara OpenBridge Modeler na nyocha na njirisi atụmatụ nke LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge steel na RM Bridge Advanced.
OpenRoads SignCAD OpenRoads kwalitere iji gosipụta ihe ngosi 3D nke ihe ịrịba ama n’ime atụmatụ ọhụụ ma ọ bụ nke dị adị.
Mepee mmelite ngwa
(Ọhụrụ) Bentley Systems kwupụtara inweta Citilabs, iji kwe ka simulaiti okporo ụzọ CUBE ya dị na OpenRoads.
Ngwa nke PLAXIS na SoilVision na-enyere ndị injinia aka ịrụ ọtụtụ ụzọ nyocha, na-agbanyeghi ma ha nwere oke ma ọ bụ na ha enweghị oke. Ihe mmekorita ohuru ya na RAM, STAAD na OpenGround na-eme ka odi nma nke uzo ihe omimi zuru oke maka njikota onu na nyocha nke ala, nkume na ihe owuwu ndi ozo.
Ihe ngbako dijitalụ maka imewe mmekọrịta
(Na Siemens) Bentley OpenRoads ga-erite uru Aimsun site na Siemens maka ịme ọhụụ nke okporo ụzọ larịị micro.
(Na Siemens) Onye na-ahụ maka ụgbọ elu OpenRail na-esote onye na-eme ka ndị ọbịa OpenRail na Siemens SICAT Master.
(Na Siemens) OpenRail-Entegro Train Simulator na-ejikọta Siemens Entegro na Automatic Train Control Simulation na Bextley ContextCapture, OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer na LumenRT, maka arụmọrụ na Digital Twins.
Previous Post«Previous Akụkọ banyere Geo-Engineering - Afọ Infrastructure - YII2019
Next Post «EthicalGEO» - mkpa iji nyochaa ihe ize ndụ nke ọnọdụ geospatialNext »